musha Kanadha Singers The Weeknd Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Iyo Weeknd Biography inokuudza chokwadi nezve yake yehudiki nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Makkonen naSamra Tesfaye), Mhuri, Rudo Hupenyu (Bella Hadid naSelena Gomez).
Moreso, wemuCanada Grammy-anokunda muimbi Mararamiro, uye Mubhadharo, Hupenyu hweMunhu uye mambure akakosha.
Mune mashoma mazwi, tinokupa iwe yakazara mufananidzo weiyo Hupenyu nhoroondo yeThe Weeknd, muCanada muimbi, rekodhi mugadziri uye munyori wenziyo.
Yedu Biography inotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika iye ave zita remumba muindasitiri yevaraidzo.
Kuti unyorove rudo rwako rweBiography, isu tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza Hupenyu hwaWekend. Pasina mubvunzo, iyo mifananidzo iwe yaunowana pazasi inopfupikisa nhoroondo yehupenyu hwake.
The Weeknd Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ehe, isu tinomuziva nekugadzira nhau seyekutanga wekuCanada solo muimbi wekutungamira iyo Super Bowl LV halftime show.
Kunyangwe zvake kubudirira, isu tinoziva kuti vashoma chete vateveri vakaverenga pfupi chidimbu cheThe Weeknd's Biography.
Naizvozvo, tinoona zvakakodzera kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya ye The Weeknd uye kuputsika kweakavaraidza ruzivo kusvika parizvino. Zvino, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Iyo Yevhiki Yevacheche nyaya:
Kune ekutanga maBiography, iye ane zita rezita - The Weeknd. Abel Makkonen Tesfaye akazvarwa munyika ino pazuva re16th raKukadzi 1990 kuna amai vake, Makkonen Tesfaye, uye baba, Samra Tesfaye.
The Weeknd akaberekerwa muToronto, Ontario, kuCanada ari ega mwana wababa naamai vake.
Abel Makkonen Tesfaye akazvarwa we mubatanidzwa pakati pevabereki vake (Makkonen naSamra Tesfaye), ane mifananidzo iri pazasi.
Mufananidzo wekutanga weWeekend mumwe nemumwe nababa vake, Samra Tesfaye naAmai, Makkonen Tesfaye.
Muimbi weGrammy-anokunda aifanira kukunda zvipingamupinyi kuti ave kuimba kwekunzwa uye Super Bowl musoro wemusoro. Akakurira mumusha weToronto unonzi Scarborough.
Vhiki rakakurira munharaunda ine tsika dzakasiyana yakazadzwa neEast Africa nevanhu vanobva kuIndia, Middle East, neCaribbean. Zvaive zvakaoma kukura.
Abel Makkonen akakura achiteerera akasiyana marudzi enziyo, kusanganisira mweya, chinyararire dutu, hip hop, funk, indie dombo, uye post-punk.
Mufananidzo Abel Makkonen Tesfaye, achiri mudiki.
Kutambura nekunyara uye kusagadzikana, Tesfaye akaita nhamburiko dzekuziva kudzivisa kuzivikanwa semwana. Akashuva a hama zvekuti akaudza vezera rake mukirasi kuti aive nevanin'ina.
Nzira chete yekutiza nhamo nemhirizhonga zvaakaenda nazvo yaive nekugadzira mafirimu.
Mukupesana, Zvisineyi, mimhanzi yakabva yave kurapa kwepanyama. Mhedzisiro yekuimba yakakurumidza, uye vanhu vakakuda. Yakaponesa hupenyu hwangu, anodaro.
Na4, amai vake, Samra Tesfaye, vakaenda naye kuimba yemitambo kuti anoona bhaisikopo kekutanga.
Iyi firimu yaive nemumwe wake wekuOntario Jim Carrey anoratidzwa mu1994 komedhi The Mask. Zviratidziro zvakamudya moyo uye zvakawedzera kurota kwake kwechiitiko chekuenda kune imwe nzvimbo yemafirimu.
Vhiki Yemhuri Mhemberero:
Pasina mubvunzo, zviri pachena kuti hupenyu hwakave hwakave hwakaomarara sei kuCanada varaidzo nyeredzi. Kugara usina baba kuriritira mhuri kwakasiya chinzvimbo, zvese pamoyo uye nemari.
Mune vamwe kuti vatize chokwadi chehurombo hwavo, The Weeknd yakawana varaidzo. Abel naamai vake, Makkonen, vakatambura kuitaanopera kusangana. Vakanga vari varombo.
Vhiki reMhuri Mavambo:
Achitaura nezvemidzi yake, Abel Makkonen Tesfaye anobva kuEthiopiya. Vabereki vake Makkonen naSamra Tesfaye vakava vekuEthiopia vakapinda muCanada mumakore ekuma80 apfuura.
Musimboti wekutama kwavo kwaikonzerwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika nenzara zvakazadza nyika yekuEast Africa. Zvakangodaro, Vhiki rakakurira kunze kweToronto munzvimbo ine tsika dzakasiyana dzakazadzwa neEast Africa.
Aigara nevanhu vaibva kuMiddle East nekuCaribbean. Ethiopian-Amharic ndiwo mutauro wekutanga waakadzidza nekuti gogo vake, avo vakamurera, vaisataura Chirungu. Nekuda kweterevhizheni uye kuve muCanada, akadzidza Chirungu futi.
Zvisinei, sezvo aipinda chikoro chekunyudza cheFrance, kwaunopinda mumatambudziko ekutaura Chirungu, aifanira, nekuwedzera, tenzi. mutauro wechiFrench. Pamwe chete, anotaura mitauro mitatu.
Nezve chirevo, isu tinogona kufungidzira kuti iye ane tarenda muvaraidzi ndiye Afro-Canada. Mukuwedzera, anobva kuOntario muCanada. Mufananidzo uri pazasi unopa kuratidzwa kwemifananidzo yemidzi yake.
Pikicha yekuona inoratidza Mhuri yeWekend Mavambo.
Iyo Weeknd Ekutanga Bio - Basa:
Iye Afro Canadian akatanga basa rake nerondedzero yekutamba yaakatanga kubva pawebhusaiti yake mahara.
Marekodhi ake matatu eMix, 'China' 'House of Balloons', uye 'Echoes of Silence' akamubatsira kugadzira fan yakavimbika. Yese marekodhi ake e studio ane ongororo yakanaka.
Rwiyo rweWeeknd rwiyo rwakatanga paakasangana nemugadziri, Jeremy Rose. Ivo vaviri munguva pfupi vakatanga kupa R & B kurekodha yakanzi 'The Weeknd'.
Zvakangodaro, manzwi matatu aakagadzirira mugadziri - 'Zvaunoda,' uye 'Rose haana kushandisa Mangwanani.'
Mufananidzo pamwe neshamwari dzake pakutanga kwebasa rake.
Saka, muna 2010, Tesfaye akagadzira chiteshi cheYouTube chine zita rekushandisa 'The Weeknd' uye akaisa nziyo nhatu. Zvidimbu zvakawana mukurumbira nekukurumidza uye zvakagadzira blog blog ine mazwi ne muimbi Drake.
Kunyara kwake kwakamutadzisa kubva kuruzhinji panguva yebasa rake rekutanga. Vhiki rakadzivirirwa kupa kubvunzurudzwa uye harina kana kushandisa chifananidzo chake mumatepi ake marekodhi anofukidza.
Pane kudaro, aifambidzana nevateveri vake pa Twitter. Mukupesana, akawana chivimbo sezvo zvigadzirwa zvake zvaive nemataiti pasi rese.
Dzidzo yevhiki nevhiki:
Mudiki akapinda zvikoro zviviri. Kutanga kwaive West Hill Collegiate Institute. Chechipiri, yaive Birchmount Park Collegiate Institute.
Zvakadaro, akange adzingwa mune imwe uye akasiya imwe mushure memwedzi mitanhatu pa17.
Saka, mushure mekuchinja zvikoro kanoverengeka uyezve kusiya chikoro, akanyengetedza shamwari yake yepamoyo, La Mar Taylor, kuti abatane naye.
Pamwe chete neimwe shamwari, Highly Alleyne, vaviri vacho vakatamira mu imba yekurara imwe muToronto muParkdale nharaunda.
Abel Tesfaye panguva yemazuva ake kuchikoro.
Vhiki anoyeuka amai vake vachimupa tarisiro yakaipisisa chero angave nayo paakakweva mubhedha wake kubva pamba pavo. Akatarisa kwaari sekunge akange akundikana mumabasa ake saamai.
Mune zvese izvo, nyeredzi yeCanada inobvuma kuti iye achiri kunzwa kusagadzikana kana achitaura kune mumwe munhu akadzidza. Naizvozvo, aifanirwa kutora chikamu mumuchinjikwa mapuzzle kuvandudza mazwi ake.
Iyo Weeknd Biography - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
Muna 2011, Abel akaburitsa runyorwa rwake rwekutanga, 'Imba yeBhaluni.' Yaive nezvidimbu zvine mutsindo zvaakagadzirira Rose Jeremy, pamwe nemamwe marekodhi. Iyo tepi yakasarudzwa semusarudzo we2011 Polaris Music Prize.
Nemukurumbira waakange aunganidza, The Weeknd akaita zvakasiyana mukati memwedzi mishoma. Nguva pfupi yapfuura, akatanga chiitiko chekubatana naDrake semuimbi.
Mushure mezvo, muna 2011, akatangazve imwe playlist yakanzi 'China', ine mamwe mapfumbamwe.
Kubatana kwevhiki kwevhiki naDrakake semuimbi.
Mutambo wechitatu wekusanganisa weChamp yaive 'Echoes of Silence', yakaburitswa musi wa21 Zvita 2011. Iyi imwezve yaive nenziyo pfumbamwe, ndokuzadzisa iyo 'Balloons Trilogy'.
Iwo matatu maMixapes pamwe chete akakwidziridza mukurumbira wake, zvichimuita nyeredzi mukati megore. Muna 2012, iye nechikwata chake vakatanga kuratidza kumitambo yakasiyana siyana muUS neEurope.
Bhendi reVhiki rakatanga neCoachella Festival muCalifornia. Akazoita kuPrimavera Sound Mutambo kuSpain. Portugal neMutambo Wisina waya muLondon zvakauya pakupedzisira.
Iyo Weeknd Biography - Simuka kune mukurumbira:
Achisimudzira nzira yake kune hukuru, The Weeknd yakasaina chibvumirano neRepublic Records munaGunyana 2012 uye, mukubatana pamwe nechinyorwa chake, XO yakatanga musangano wakanzi 'Trilogy' muna Gumiguru.
Iko kuunganidzwa kwaive nematiraki ese kubva kune ake matatu maMixapes, pamwe nezvimwe zvitatu zvakanyorwa. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, weCanada tarenda yakaramba ichiita zviitiko zvikuru.
Akaburitsa studio yake yekutanga, 'Kiss Land.' Muunganidzwa, Drake akaonekwa muenzi mune rwiyo 'Rarama Kune'. Akabatsira pakurekodha kwemuHollywood bhaisikopo 'Iyo Nzara Mitambo: Kubata Moto'.
Abel mushure mezvo akaperekedza Justin Timberlake pane yake 'Iyo 20/20 Chiitiko World Tour. Muna 2014, akaita kudyidzana na Ariana Grande pa duet.
Mushure meizvozvo, akaburitsa 'Earned It' kubva muruzha rwemufirimu 'Fifty Shades of Grey'.
Vhiki iri mukudyidzana kuita pamwe naAriana Grande mu2014.
Muna 2015, akaburitsa 'Runako Seri kweMupengo.' Iyo albam, yakaratidza muenzi kuoneka kubva kuLabrinth, Ed Sheeran naLana Del Rey. Iyo albam yakaramba ichisanganisira 'Wakawana.'
'Starboy', yake yechitatu studio dambarefu, yakaburitswa muna 2016. Izvo futi aive nemuenzi wekuonekwa kubva kune vane mukurumbira maartist saDaft Punk, Lana Del Rey, Future, uye Kendrick Lamar.
Iyo clip iri pazasi inopa shanduko yeThe Weekend kusvika mukurumbira wake.
Akazobatana naKan West pa 'FML' kubva kuna Kanye's 'Hupenyu hwePablo'. Uye zvakare, akaonekwa pachidimbu '6 Inch' kubva kuna Beyonce's 'Lemonade'.
Parizvino, Akaimba nenyeredzi senge Kanye West, Beyoncé, Ed Sheeran, Kendrick Lamar naDrake.
Uye nemarekodhi mashanu e studio, mana Nha.
Svondo iri ikozvino iri pakati pevatengesi vepamusoro-soro pasi rese, iine matatu (3) maGrammys.
2021 Super Bowl LV hafu yenguva yekuratidzira:
Iyo Super Bowl LV halftime mharidzo, inozivikanwa zviri pamutemo sePepsi Super Bowl LV Halftime Show, yakaitika musi wechinomwe waFebruary 7.
Chiitiko ichi chakaitika kuRaymond James Stadium muTampa, Florida. CBS muUS yakaratidza terevhizheni.
Sezvineiwo, muimbi ane mukurumbira The Weeknd yakaita mhirizhonga. Tora chill, iwe uchinge uchinge uchinzwa nezvechiratidzo mune clip pazasi.
Iye ndiye wekutanga muCanada muimbi muimbi kutungamira hurukuro. Asi zvisati zvaitika zvese, musi wa5 Kukadzi 2021, Tesfaye akaburitsa yake yechipiri yakanyanya kurova hit, Iyo Inosimudzira.
Iyo albhu dhizaini yakahwina nzvimbo yechipiri paUS Billboard 200, ichiiita iyo yakasarudzika-yepamusoro-chati yekuunganidza uye yekutanga svondo rekutanga kutanga kweakanyanya kurova kubvira album yaBlake Shelton ya2019, Yakazara Yakatakurwa: yaMwari Nyika.
Tesfaye anoburitsa yake yechipiri yakanyanya kunaka hit, Iwo Akakoshesa muna 2021.
Mune zvese izvo, Chiitiko chehafu yenguva chakawana mazita matatu pa73, Primetime Emmy Awards.
Mamiriro ake anosanganisira Outstanding Variety Special (Rarama), Iyo Yakasarudzika Mwenje Dhizaini / Mwenje Direction kune Yakasiyana Special.
Moreso, Yakatanhamara technical Direction, Camerawork uye Kudzora Vhidhiyo. Musi wa11 Chivabvu, Abel akatambira Brit Honours yake yekutanga yeInternational Male Solo Artist.
Aimbova Mukadzikadzi wekutanga weU.S, Michelle Obama, akapa rukudzo kwaari kuburikidza neyevhidhiyo kufona.
Parizvino, iye wekuCanada anovaraidza anga achiwedzera. Akaburitsa zvigadzirwa zvakawanda zvine kupwanya zviito. Svondo yacho yakarongwa muna Ndira 2022 yeiyo Mushure Maawa Ekushanya.
Iyo Yevhiki Yekuita Basa:
Nezve iyo Weeknd's Biography, Tesfaye akaita akawanda mareferensi emabhaisikopo mumavhidhiyo ake ezwi uye tei. Iye ari cinephile.
Weekend inofarira cinema. Munguva yeTelluride Film Festival muna 2019, akaita debut yake mufirimu Uncut Gems.
Zvichienderera mberi, pakuonekwa kwake kwechitatu kwevaeni Mugovera Husiku Live, akatamba mu skit nevatambi Kenan Thompson naChris Redd.
Musi wa4 Chivabvu 2020, akanyora pamwe uye akaisa nyeredzi muchikamu cheAmerican Baba !.
Vhiki revhiki rakanyora pamwe uye nyeredzi muchikamu cheAmerican Baba!.
The Weeknd zvakare yakataura mavara matatu panguva ye200th episode yeRobot Chicken.
Musi wa29 Chikumi 2021, Tesfaye akazivisa kuti achange achigadzira zvine hungwaru, achitora nyeredzi uye nekunyora pamwe, mutsva weHBO terevhizheni mutambo wemutambo.
Mutambo unonzi, Idhori pamwe chete nemugadziri weEuphoria Sam Levinson naTesfaye waanogadzira shamwari Reza Fahim.
Iyo Yevhiki Yehunyanzvi:
Abel anoti Michael Jackson, R. Kelly uye Prince sekurudziro yake yekutanga. Saka akataura kuti Music yaJackson sekiyi mukukwira iye kuti ave muimbi, achifananidza mazwi e "Akasviba Diana" semufananidzo.
Iye zvakare akataura kuti vaimbi veEthiopiya, kusanganisira Aster Aweke, akakurudzira manzwi ake emhando yepamusoro. Akateerera mhando dzakasiyana dzemimhanzi, kusanganisira hip hop, mweya, funk, post-punk uye indie rock.
Izwi raTesfaye rakavakirwa padhuze neyakaomeswa, opaque kugadzirwa uye inoratidza inononoka tempos, rumbling bass, uye forlorn maungira. Anotakura yakareruka mwenje-lyric tenor vocal renji, iyo inotenderera kupfuura matatu octave.
Zvinyorwa zvake zvinosanganisira sampuli izvo zvisingaenderane neR & B kugadzirwa, kusanganisira punk uye rimwe dombo. Mune konzati, Tesfaye anokodzera zviito zvake zvakavezwa zvine hungwaru-senge dombo rekunaka.
Iwo emanzwiro, ekurwadza mazwi anowanzo kuratidza kurwadziwa uye kubata nezvebonde, zvinodhaka, uye mapati nyaya. Izvi tinozviona kunyanya muAfter Hours uye House Of Balloons.
Ndiani Weekend Kufambidzana?:
Svondo yave iri mune yekudyidzana neiyo runway modhi Bella Hadid kubvira 2015. Iye achiri kuoneka muvhidhiyo yake yekuimba 'Muusiku'. Zvakangodaro, vaviri vacho vanonzi vakaputsa mu2016 nekuda kwemarongerwo anopesana.
Mukutanga kwa2017, akamutsa runyerekupe nezve kufambidzana neyepop nyeredzi selena Gomez. Ivo vaviri vangadai vakasangana vachiri muchirongwa pamwechete. Mushure mehukama hwake naBella Hadid, iyo yekuCanada inofamba na Selena Gomez yakasimbiswa.
Zvakare zvakare, Selena neThe Weeknd vakapatsanurana mukati Gumiguru 2017. Asi ipapo, zvishoma nezvishoma, akamutsidzira hukama hwake naBella zvakare. Nehurombo, nyaya yacho yaive yenguva pfupi, ivo vakapatsanurana nguva pfupi yapfuura.
Collage yeiyo The Weekend naBella Hadid naSelena Gomez zvichiteerana.
Hatikwanise, asi kutaura nezvekuzvipira kwaakaitwa naamai vake, Makkonen Tesfaye.
Iye, pamwe chete nemimwe mitezo yemhuri, anofanira kuva akagovera. Saka ngatitorei nguva ino kuti titarise mumwe nemumwe mune imwe neimwe yadzo.
Nezve Wevhiki Baba - Samra Tesfaye:
Ivo baba vevanozivikanwa veCanada baba havana kumbove chikamu chehupenyu hwaAbel vachiri kukura. Anoshuma iye chete akaona baba vake kashoma. Baba veWeeknd vaive vakabatikana nemumwe wavo mutsva nevana.
Samra Tesfaye haana kumboroora amai vaThe Weeknd, Makkonen Tesfaye. Zvisinei, iye anoshuvira kuve chikamu chehupenyu hwemwanakomana wake mukurumbira zvakare. Anoronga kukumbira ruregerero nekusavepo panguva iyo mwanakomana wake aimuda.
Kuenderera mberi nehupenyu hwedu hwechokwadi, The Weeknd inoshuma kuti baba vake vaisave munhu akaipa. Nyaya chete, sekutaura kwaAbel, yaive yekuti aive asipo.
Vhiki nevhiki baba vake vasipo, Samra Tesfaye mumufananidzo wekutanga.
Zvizhinji Nezve Amai Vhiki - Makkonen Tesfaye:
Hupenyu hwake hwese, The Weeknd akavimba zvakanyanya naamai vake, Makkonen Tesfaye. Akagara aripo kuti agovane zviitiko zvese zvehupenyu hwake. Hameno kuti anozviti mukomana wamhamha.
Zvese zvakanaka, anodaro, akadzidza kubva kuna mai vake. Mune vamwe kuwana raramo, Makkonen Tesfaye akaita akawanda mabasa panguva imwe chete. Akashanda mumabasa matatu kana mana saamai vasina murume.
Makkonen kutanga aishanda sa mukoti uye anodyisa kutsigira mhuri achienda kukirasi yeusiku panguva imwe chete.
Mufananidzo weWeekend naamai vake, Makkonen Tesfaye.
Nezve The Weeknd Siblings:
Sezvaungave iwe wakacherekedza, ichitevera yedu Nhau, Iyo Svondo haina vanun'una. Ndiye ega mwana wekubatana kwemubereki wake (Makkonen naSamra Tesfaye). Nekuda kweizvozvo, akagashira kuzara kwaamai vake kubva paudiki hwake, kusvika mukurumbira wake.
Zvakare, kunyangwe vabereki vake vaive vasina kuroora, mushure mekuparadzana, Baba vevhiki, Samra Tesfaye, vaive nevana kubva kuhukama hwake hwaitevera. Nekureva, iye anofanirwa kuve nehama dzekurera. Zvisinei, isu hatina ruzivo nezve ivo.
Nezve Weeknd Relatives:
Vakakurumbira veCanada vanofanirwa kuve nehama shoma padhuze nevabereki vake. Hama dzaWeekend dzinofanirwa kuve nasekuru vake, Tete, nasekuru nasekuru.
Anonyanya kukodzera kutaurwa ngaave ambuya vake amai vamai vake. Akachengeta mukurumbira apo amai vake vakaenda kubasa rake.
Akanga ari iye zvakare akadzidzisa The Weeknd kutaura Ethiopian Amharic. Ona epic foto naTete vake pazasi.
Mufananidzo wekutanga waAbel, naTete vake.
Tesfaye anoda kuzivikanwa nekuzivikanwa. Yake Jean-Michel Basquiat-akafuridzirwa bvudzi ndiyo yake inonyanya kuzivikanwa chimiro. Jean-Michel Basquiat inyanzvi yeBrooklyn graffiti.
The Weeknd yakatanga kukura bvudzi rake muna 2011 uye inotaura nezvekuti zviri nyore sei kurichengeta neshampoo yakaoma.
Ari pakati Vanhu zana Vane Simba Kwazvo kubva muna 100. Munguva yake yekusarudzika, Abel anofarira kuona terevhizheni uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Svondo rinonakidzwa nekuona terevhizheni uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Tesfaye akakurira semuEthiopia Orthodox. Zvisinei, paakabvunzwa nezvezvitendero zvake mu2020, Tesfaye akati haazive zvese asi anotenda kuti hupenyu muyedzo. Anoti kana uchinamata, unofanirwa kupfuura nezvimwe zvisingaite.
Imwe yaanofarira mazwi anoti Gamuchira zvauri. Iva akatendeka kwauri. Usatye kuti vanhu vakuone iwe chaiye uye zvaunogona kuita. Saizvozvo, iva chivimbo uye gara uchigumbatira chako chaicho chokwadi.
Pasina mubvunzo, muCanada Grammy-anokunda muimbi akazviitira iye zvakanaka. Makorokoto ake amuunganidzira mari inokwana kunakirwa nekutenga chero chaanoda.
Muna 2017, The Weeknd yakatenga imba itsva muHidden Hills, California, ne $ 18.5 miriyoni, iyo yaakatengesa kuMadonna muna 2021 nemadhora 19.3 miriyoni. Zvakare, munaNovember 2019, akatenga imba yemba muWestwood, Los Angeles.
Iyo Weeknd's 70 mamirioni emadhora LA imba, ichiratidza huwandu hwayo hwedzimotokari.
Zvisinei, kubvira 2018, akahaya imba yepenthouse muNew York City. Uye zvakare, muna 2021, akatenga mamirioni makumi manomwe emadhora iyo LA imba kubva kuDutch mutambi Reinout Oerlemans.
Iyo yekutengesa ndeimwe yemakuru LA real estate madhiri egore zvinoenderana neWall Street Journal. Imba yacho ine 5-bay garaji ine yakanakisa neon mwenje.
Nzvimbo dzekupaka inogarisa mazhinji emota dzake dzekunze dzakadai sePorsche 911, McLaren P1, Bentley. Moreso, Mulsanne, Mercedes-AMG G63, Range Rover uye iyo Lamborghini Aventador SVJ iyo inokosha madhora zviuru mazana mashanu anegumi nemakumi manomwe nenomwe.
Iye wekuCanada Anowanikwa muPorsche 911 yake, inosvika madhora zviuru zana.
Zvisinei, haana kuwana mari kubva kuSupp Bowl Hafu yenguva yekuratidzira, akazviita chiitiko chisingakanganwike. Sekureva kwemukurumbira muimbi, Svondo rakashandisa mamirioni manomwe emadhora emari pacharo.
Mota Yevhiki Yevhiki Mune Super Bowl Ratidza - Iyo Widebody AMG-Yakaputirwa Mercedes 300 SL.
Iyo 2021 halftime muimbi we Super Bowl LV akatengesa anopfuura 70 mamirioni marekodhi muUnited States chete. Akakunda akawanda laurels, pamwe nemaGrammys mazhinji. Kunze kwemanyorerwo uye manzwi, The Weeknd naizvozvowo yakabatanidzwa mukuita kwakasiyana-siyana kwemabhizimusi.
Kubata kwake kunosanganisira kushandira pamwe nemhando dzakawanda uye kugadzirwa kwechiratidzo chake chinonzi "XO" Nhasi The Weeknd ndomumwe wevanobhadharwa mari yepamusoro pasirese.
Mu 2017, sekureva kweForbes, mihoro yake yakapfupisa kusvika pamamirioni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora. Kunyangwe zvakadaro, maererano neWaziwayoNetWorth.com, Iyo Weeknd's 2021 mambure akakosha anenge madhora zana emamirioni.
Chibvumirano cheSvondond chinosvika pamadhora mazana manomwe ezviuru. Parizvino, akabata anotevera mabhenji uye zvigadzirwa. Akamboitawo zvibvumirano naAlexander Wang, Apple Music, H&M, PAX Vaporizers naPuma.
Munguva yeKiss Land Fall Tour, Vhiki rakabatana nekambani yemakondomu ONE. Kubatana kwacho kwakanangana nekupa makondomu-mashoma emakondomu pane zvaakaratidza.
Makondomu hunyanzvi hwakafemerwa nedambarefu rake reKiss Land rakadhindwa kune rimwe divi uye "Oxy" rakadhindwa kune rimwe racho. NaNovember 2015, kuenderera mberi nekusimudzira Runako Seri kweMupengo, Tesfaye Akabatana naPax Labs.
Iyo collabo yaifanira kuburitsa yakashomeka vhezheni vhezheni yeiyo PAX 2 vaporizer, mudzanga wemagetsi unoshandiswa mumapati panguva yeiyo Madness Fall Tour. Iyo e-mudzanga yaive ne "xo" yekumaka uye yaigona kutamba "Iwo Makomo" kana yakavhurwa.
Kupera kwevhiki neimwe yemidzanga yemagetsi (PAX 2 vaporizer) inoshandiswa mumapati panguva yeThe Madness Fall Tour.
Iyo Svondo Yechokwadi Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane mashoma biography chokwadi chingafadza fancy yako nezveThe Weeknd.
Chokwadi # 1: Yake Stage Zita:
Abel akasarudza zita rake remuchadenga muripo kusvika iye neshamwari pavakasiya koreji vaine makore gumi nemanomwe ekuberekwa. Vakatora magumbeze avo ndokusiya imwe weekend vasina kuzombouya kumba.
Zvisinei, waakaparadzanisa aimbove mugadziri, Rose, anoti zita iri izano rake. Tsamba E yakaverengerwa kudzivirira matambudziko ekutengesa neCanada bhendi mukupera kwesvondo.
Chokwadi # 2: Anopa anobatsira:
The Weeknd yakapa madhora miriyoni imwe nemazana mashanu muna Chikumi 1.5. Chetatu chekupihwa chakaenda kuMusiCares kunobatsira kuimba vaimbi vanokanganiswa nekudzimwa kwekoronavirus. Zvakare, chimwe chechitatu chinotemerwa vashandi vemberi muScarborough.
Iwo ekupedzisira madhora mazana mashanu ezviuru akapatsanurwa pakati pemasangano akati wandei mukumuka kwekufa kwaGeorge Floyd. Kurera kwevhiki kwevhiki kwakaoma-kugogodza akafuridzira hupenyu hwake nzira.
Chokwadi # 3: Akashanda kuAmerican Apparel:
Asati aiita yakakura, The Weeknd yakapeta shati pa American Apparel chitoro chitoro muToronto kutenderedza 2010. Akaita manzwi ake achida kuzvitengesa kune mumwe muimbi muimbi.
Vaaishanda navo vaizoteerera kusarudzwa kwake ivo vachishanda vasingatomboziva kuti ndiye aive achivaimba.
Chokwadi # 4: Vasina pekugara panguva:
Ipo The Weeknd yaigara mu $ 850-pamwedzi imba yake nemaviri epakoreji, vatatu vacho vaizobisa chikafu kubva pamusika padyo kuti vararame. Vakabhadhara rendi nekutarisa zvakanaka.
Pakupedzisira kutengesa mbanje nemari shoma ye mari, iye nevaaigara navo vakanakidzwa ne "hapana zvinorambidzwa" mararamiro uye inogona kukwira pamishonga yakadai seMDC, Xanax, cocaine, howa uye ketamine.
Vakadzingwa mumba, uye The Weeknd akabvuma kuti aizotaurira vasikana vakasiyana siyana kuti anovada, saka aizove nenzvimbo yekugara.
Chokwadi # 5: Drake akamubatsira kutanga rake basa:
Drake pakutanga akaunza Muimbi-mudiki-aizivikanwa panguva iyoyo kune fanbase yake muna 2010 nekutumira maviri ezvidimbu zvake.
Zvakazoitika muna 2011, apo The Weeknd aisimudzira yake yekutanga House of Balloons mixtape, Drake akati aite kuti aoneke pane imwe yenzira dzake, Crew Love.
Drake mukuita neThe Weekend.
Chokwadi # 6: Kusarudzwa uye Mahoridhe:
Abel Tesfaye akahwina matatu maGrammy Awards, gumi nemapfumbamwe Billboard Music, maviri MTV Vhidhiyo Rwiyo, mashanu eAmerican Music, gumi neshanu Juno Honors, uye 1 Academy Awards.
Muna 2015, akagashira iyo Allan Slaight Mubairo. Kufamba kweCanada kwemukurumbira kwakapa rukudzo. Izvo zvaive zveku "gadziridza zvakanaka mumasango enzwi, firimu, zvinyorwa, zvinoonekwa kana zvekuita hunyanzvi, mitambo, hunyanzvi kana hushamwari."
Chokwadi # 7: Kuda MJ:
Pakafa Michael Jackson, zvakanzwa kunge chikamu chemhuri yake chafa. Anoshuma achiti; Ini ndinoda kuti vateveri vangu vazive kuti zvidimbu zveruzha ndezvavo.
Zvakare, Abel anoona kuti kana mwari akarambidza, chero chinhu chikaitika kwaari, zvinoita kunge chidimbu chavo chaenda.
Semunhu mukuru fan yaMichael Jackson, akafukidza MJ's 'Dirty Diana' pane yake yechitatu mixtape ', Echoes of Silence'.
Akafuridzirwa neanozivikanwa M. J kuti ave muimbi, aive yakazofuridzirwa nenyeredzi dzeR&B saAaliyah, Missy Elliott, Timbaland uye The Neptunes.
Abel akafukidza Micheal Jackson's 'Yakasviba Diana' pane yake yechitatu mixtape.
Chokwadi # 8: Iyo Svondo yeGrammys kurwisa:
Mushure mekunge abatwa neRecording Academy muna 2020, Vhiki inonzi maGrammy uori.
Akatadza kugamuchira kusarudzwa kumwe chete kunyangwe paine budiriro huru yerekodhi yake 'Mushure Maawa' uye yaro hit singles.
Nekuda kweizvozvo, Abel akarwisa chiitiko chemubairo. Akafunga kusaendesa zvimwe zvidimbu kuGrammys.
Chokwadi # 9: Kuvhiya kwepurasitiki:
Pakushambadzira kuburitsa kwake 2020 album Mushure Maawa, Vakakurumbira veCanada vakatanga kutamba kumeso kwakarohwa, ipapo kumeso kwakafukidzwa nemabhandeji. Zvakare, iye pakupedzisira akazofumura yakanyanyisa kuvhiya yakachinja kutaridzika nerubatsiro rwe prosthetics.
Musimboti, anotsanangura, yaive yekuratidzira tsika isina musoro yevakakurumbira veHollywood. Vanhu vachizvibata vega nekuda kwe trivia zvikonzero zvekufadza uye kusimbiswa.
Vakakurumbira veCanada vachitamba kumeso kwakarohwa, ipapo kumeso kwakafukidzwa nemabhandeji.
Chokwadi # 10: Nei vashandi veThe Weeknd vachidaidzwa kuti 'XO':
Vamwe vakataura kuti XO inongomirira kumbundirana nekutsvoda, nepo vamwe vachipokana tsamba dzinomiririra ecstasy uye OxyContin. Tichifunga kuti XO chikamu che sirogani "XO 'kusvika isu tadarika", iyo yekupedzisira inoita senge inogoneka.
Chokwadi # 11: Iko Kufemerwa Kwekutanga Kwevhiki:
Jim Carrey ndiko kufemerwa kwekutanga kweCanada kuve chero mhando yeartist. Anoda kusvika makumi matatu emakore gare gare, vese varume vakagamuchira sumo kuburikidza nerunyorwa. Vhiki yakakoka Carrey kuimba yake yeLos Angeles kuti anzwe zvimwe zvinyorwa zvitsva mu2019.
Nekudaro, zvakazoitika kuti havana kungoziva kuti vaigara munharaunda imwechete, asi Carrey nenzira imwecheteyo aiziva theatre chaiyo amai vake yavakamutora kuti aone Iyo Mask.
Jim Carrey ndiye wekutanga kukurudzira kwaThe Weeknd kuve chero mhando yeartist.
Chokwadi # 12: Makakatanwa nenyaya dzemutemo:
MunaNdira 2015, Tesfaye akawana kusungwa achipomerwa kurova Las Vegas Mupurisa weDhipatimendi. Haana mhosva, saka akatambira mutongo wemaawa makumi mashanu ebasa renharaunda.
MunaNdira 2019, Tesfaye akagamuchira kushoropodzwa kwemazwi mu "Akarasika Mumoto". Muchikamu chine ruzha, Tesfaye anoreva mukadzi anokwezva murume kana murume se "chikamu" obva ati "achamurova akatwasuka", zvinonzi nevashoropodzi vanovenga ngochani.
Chokwadi # 13: Manyepo ekupomera
Muna Zvita 2015, Tesfaye akamhan'arirwa neCutting Edge Music. Ivo vakapomera kuti bassline yechikamu chakanzi "Makomo" chinobva mukuumbwa kunoonekwa mufirimu rekunyepedzera, The Machine.
Mugadziri wemimhanzi akatumira yakazvimirira Twitter meseji kuna Tom Raybould, munyori wezvikamu zvemufirimu, kuti ataure nezve muyenzaniso.
Muna 2020, Tesfaye uye Kendrick Lamar akamhan'arira izvozvi-zvisina basa indie bhendi Yeasayer. Ivo vaviri vakati "Ndinyengetererei" inosanganisira muenzaniso usingatenderwe wekurekodha kwavo "Sunrise". Kutevera gore iro, Yeasayer akazvipira kudzinga mhosva.
Iyo Svondo Yehupenyu Biography Pfupiso:
Rwiyo rwemhanzi rwaTesfaye nderwechiitiko uye rwumwe R & B. Moreso, pop, electro-pop, uye synth-pop. Tesfaye Abel akabatsira kuwedzera R & B's inotapira palette kuisa indie uye zvemagetsi matekinoroji. Tinogona kuseta zvidimbu zvake seimwe nzira yeR & B tag.
Kunyangwe iwe usingakwanise kupfuura zvese zviri pamusoro, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwechokwadi nezveiyo Canadian Grammy Mubairo-anokunda muimbi.
Zita rizere: Abel Makkonen Tesfaye
Zita rekudanwa: The Weeknd
Zuva rekuzvarwa: 16th Zuva raFebruary 1990
Nzvimbo yekuzvarirwa: Toronto, Ontario, Canada
Basa: Muimbi, munyori wenziyo, rekodhi mugadziri uye mutambi
Mitauro: R&B, imwe R & B, popelectropop uye synth-pop
Labels: XO uye Republic
Yakabatana zviito: Ariana Grande, BellyDaft Punk, DaHeala, Doc McKinney, Doja Cat, Drake, Ramangwana, Illangelo, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Max Martin, NavTravis Scott nezvimwe.
Baba: Samra Tesfaye
Amai: Makkonen Tesfaye
Musikana: Bella Hadid (2015) uye Selena Gomes (2017)
Hobbies: Kuona TV neVideoGames
Mukuvhara iro The Weeknd's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Hazvina kuitika kune veWееknd kutonga nyika nehunyanzvi hwake munguva pfupi yakadaro.
Mune imwe nguva yatinoenda tо соllеgе аnd yakaturikwa nefriеndѕ, muimbi wekuremekedza akasiya zvese. Wiki yevhiki haana kungomira ѕсhооl asi akatosiya imba yake, tо сhаѕе yake drеаmѕ.
Kwete sekunge isu tinokurudzira vechidiki chaps mukudonha kubva kukoreji. Asi kana kugutsikana kwezvaunoda kuita uye kuva muhupenyu kwakasimba, wobva wabuda kuti uzviwanire. Nyaya yaWeekend ndeye yakakura ехаmрlе ye dеdісаtіоn uye nekushanda nesimba.
Fіndіng, mararamiro ehupenyu, ndeye basa rekuita. Onlyоmе inongoita chete zvikanganiso zvakati wandei. Mukupesana, kana ari Аbеl Маkkоnеn Теѕfауе, akatenda mune yake рurѕuit uye akazvipa zvese zvaaigona.
Tinoyemura kuti iwe wawana izvi kunyora-up zvinokurudzira uye zvinonakidza. Ramba wakashongedzerwa kune zvimwe zvinyorwa zvehunyanzvi nehunhu hwakasiyana. Chekupedzisira, iwe unogona kushanya Webhusaiti yeVhiki kubatana naye.
Zvehucheche Biography Diary- yeVANHU VENYANYA SINGERS